Azịza nye Usoro Okwukwe na Sayensị - Rabbi Michael Avraham
Azịza nye Usoro Okwukwe na Sayensị
Nzaghachi > Atiri: Okwukwe > Azịza nye Usoro Okwukwe na Sayensị
P. Ajụrụ ya afọ 4 gara aga
Shalom Harav n'ihe gbasara usoro nke sayensị na okwukwe nke rabaị dere na yaynet Rabi jiri Na physico-theological echiche
Ajụrụ m ya: N'ihe m maara, enwere obi abụọ na ihe akaebe a, n'ihi na okwu banyere ihe mbụ kpatara ya bụ okwu banyere ọnọdụ nke dị n'ihu eziokwu na ọnọdụ a adịghị etinye aka na iwu nke eziokwu anyị.. Aghọtara m na ọ bụghị ihe akaebe
Ọ ga-amasị m azịza daalụ.
Michi Ndị ọrụ Zara afọ 4 gara aga
Ọ bụrụ na m ghọtara ajụjụ gị nke ọma, ị na-ajụ n'ezie gịnị bụ ihe ndabere maka iche na ụkpụrụ nke ihe kpatara ya bụ eziokwu nke eziokwu anyị bụ eziokwu ọbụna tupu e kee ụwa (n'ihi na site n'ike ya anyị gosipụtara na ọ bụ ụfọdụ kere ya). ihe kpatara). Azịza m bụ na ụkpụrụ nke causality ekwesịghị ịbụ ngalaba nke oge, ma eleghị anya nke ụdị ihe. Ihe ndị anyị maara site n'ụwa abụghị ihe kpatara onwe ha ma e kere ihe / onye, ​​ya mere ụkpụrụ nke causality banyere ha. Ihe ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị achọ ihe kpatara ya. E kere ihe ndị dị na ụwa anyị na okike, na ha ụkpụrụ nke causality na-emetụta n'agbanyeghị oge. E wezụga nke ahụ, ọbụna n'ụwa anyị ụkpụrụ nke causality abụghị n'ihi nke a mfe nleba anya kama ihe na-ebute ụzọ echiche. Yabụ na ọ nweghị ihe mgbochi itinye ya na ọnọdụ / oge ndị ọzọ.
P. Zara 4 afọ gara aga
Site n'akụkụ nke abụọ nke azịza m na-aghọta na ọ bụ a priori (ie. ọ dabere na nsụhọ) na ọ bụ eziokwu tupu mmadụ nsụhọ ..
Ya bụ, ihe ọ bụla na-adabere na nsụhọ nke mmadụ na-etinye aka na causality ma ihe ọ bụla bụ na mbụ adịghị etinye na causality.
Dị ka nke a, aghọtaghị m ihe àmà.
Michi Ndị ọrụ	Zara 4 afọ gara aga
Ọ na-esiri m ike ikwurịta oge ndị dị otú ahụ. Ị ghọtaghị m nke ọma. Anaghị m arụ ụka na ụkpụrụ nke causality bụ nke onwe. Esemokwu m bụ na ọ bụ ebumnobi, mana ọ gbasara ihe na ahụmịhe anyị ọ bụghị ihe ndị ọzọ. Ma maka ihe ndị na anyị ahụmahụ bụ eziokwu itinye ọbụna tupu mmadụ bụ na tupu ụwa e kere (ma ọ bụ kama: banyere oge nke e kere eke n'onwe ya). Ihe m kwuru bụ na ụkpụrụ nke causality adịghị esite na nleba anya ma site na ihe kpatara ya, ma ọ dịghị emegide ya na ọ gbasara ihe onwunwe (ndị na ahụmahụ anyị) ọ bụghị ihe ọ bụla.
Mmmmmmmmmm Zara 4 afọ gara aga
Dị ka rabbi si kwuo ntọala ya sitere na nleba anya n'èzí nke echiche nke causality ma ọ bụ ihe yiri ya.
Ya mere, onye kere ya? 🙂
Shonra onye njem Zara 4 afọ gara aga
Ọ bụrụ na e kere ụwa otú ahụ n’enweghị ihe kpatara ya, gịnị mere na enweghị nsogbu ndị dị otú ahụ na-adịghị eme ọbụna taa?
Ee, agara m na kiiboodu ọzọ wee nweta nzaghachi.
Daalụ, Shunra Katolovsky